छोरी ! डाक्टरले ‘आपा’ बचाउन सकेनन्, भगवानले हाम्रो बिन्ति सुनेनन् – मिलिजुली खबर
छोरी ! डाक्टरले ‘आपा’ बचाउन सकेनन्, भगवानले हाम्रो बिन्ति सुनेनन्
मान्छे हो । जन्मेर मात्रै पनि कहाँ हुन्छ र । त्यसपछिका अनेक दुःख, कष्ट सहनै पर्ने । यस्तै आपत्ति परेको छ, काभ्रे च्यासिंखर्कका सुमिना गोलेको परिवारलाई ।
‘पिडा माथि पिडा’ सुमिना भन्छिन्–भगवान हामीलाई किन यतिधेरै पिडा । चट्याङ लागेर हजुरबुबा गुमाएकी बेथानचोक ५ की सुमिना गोलेलाई त्यस लगतै ठुलाबुबाले पनि छोडे जानुभयो । उनी जहिल्यै ती दुई जना आफन्तलाई सम्झिरहन्थिन् ।
परिवारमा सानो भाइ, बहिनी, बुबाआमा सहितको परिवार थियो उनको । तर उमेरमै बुबा पनि एक्कासी गुमाउन पुगेकी सुमिनाको यतिखेर आँखामा आँशु थामिएको छैन् । उनी भन्छिन् ‘भगवान किन हामीलाई मात्र तडपाइै तडपाई दुःख दिन्छौं, दैब पनि कति निष्ठुरी बनेको ?”
अस्पतालको डिलमा बसेर बिरबहादुर गोले दाईकी छोरी सुमिनाले आँसुको ढिक्का खसाल्दै सुनाउँदै थिईन अंकल बाबाको टाउँको, हात र खुट्टा चलेन नी । मैले लुकेर ढोकामा रहेको सिसाको प्लावबाट हेरेको अब के गर्ने ? भएको पैसा उपचारमा सकियो । ममी रोईरहनु भएको छ । मलाई छोरी सुमिनाले दुईदिन अघि गरेको बिनौला हो यो ।
मैले जवाफ दिएँ, ‘चिन्ता नगर । ममीलाई सम्झाउ । हामी छु । बुबालाई भेन्टेलेटरमा राखेर उपचार गरी रहेको छ भगवान् भरोसा । छोरी डाक्टर भरोसा । मैले यस्तै जवाफ फर्काए विकल्प थिएन । किन की म हजारौँ माईल टाढा छु छोरी बाबाको ख्याल गर है ।
छोरीले बिचैमा प्रश्न गरी, ‘हैन बाबा मुढा झै ढलिरहेको छ । आमा सानो भाई बोकेर रोईरहनु भएको छ । कसरी समालौ अंकल ?
‘अंकल मेरो साथीले भनेको डाक्टर भनेको भगवान् अरे, बाबालाई निको पारेर घर लानुपर्छ । छोरी आज मसँग तिमीलाई दिने जवाफ छैन । छोरी मलाई माफ गरिदिनु कि तिम्रा बाबालाई बचाउन सकिएन ।
म आशावादी होइन । झन् निराशावादी त हुँदै होइन । आशा र निराशाबीचको एउटा सङ्घार छ । जहाँ म उभिएको छु। उभिएको पनि के भन्ने । हराइरहेको छु ।
जीवन सङ्घर्ष हो भनेर सुनेको जुग भयो । खै यो सङ्घर्ष हो वा होइन । त्यो त समयले नै जानोस् । एउटा जीवन जिउन सिकेको हो टाक्क टुक्क । झट्ट आँशु झार्न नसकिने र खुलेर हाँस्न पनि नसकिने यो संक्रमणकालीन अवस्थामा भित्र चित्त नबुझी, नबुझी गाह्रैसँग निकालेको मन्द मुस्कान बाहेक खासै अरु निकाल्न गाह्रो पर्दोरहेछ ।
सपना सबैले देख्छन् होला । तर केही सपना अधुरै हुँदो रहेछ । सपना देख्नु र सपना पुरा गर्नु फरक कुरा हो छोरी । छोरी तिमीलाई थाहा छ । तिमीले यो बुझ्नुपर्छ बाँच्न सिक्नु र बचाउन सिक्नु फरक कुरा हो छोरी । तिमीले सुनेको ठिक हो । डाक्टरले बचाउन सक्छ । त्यसैले ऊ भगवान् हो । तर मलाइ माफ गर तिम्रो बाबालाई बचाउन सकिएन । बुबा गुमाउँदाको पीडा तिमलाई मात्रै थाहा छ छोरी ।
यो संसार २ दिनको घामछाया रहेछ । कहिले बादलले छेक्छ । कहिले डाँडाले रोक्छ । जीन्दगी चलायमान छ । जसरी जिउन चाहानु हुन्छ । त्यसैगरी जीन्दगी चल्छ । चल्नु पर्छ । अब तिम्रो काधँमा आएको छ । यस्तायस्तै कुरा मनमा खेल्दा तिमलाई फोन गर्न खोज्छु तर हातले मोबाईलको कि नै थिच्न सक्दैन ।
तिम्रो बुबासँग हिजो सानो हुँदाको सम्झना झलझली आँउछ । कसैलाई दुख परेको देख्छु । आफैलाई त्यो दुखि कार्यको पात्र बनाउन मन लागेर आउँछ । हिजो जुनी दिदीले संसार छाडेर जाँदाको एक्लोपन । आज तिमीले अविभावक गुमाउँदाको पीडा । आज निष्ठुरी दैबले म जस्ता दुखी दिनानुदिन थपिरहेछ । कति निष्ठुरी रहेछौं नि दैव ।
कहाँ सजाय दिनु पर्ने । कहाँ माया दिनुपर्ने भन्ने सामान्य ज्ञान सम्म पनि छैन् पापि दैब तिमिलाई । सजाय दिने कुनै अदालत भए पहिलो फाँसिको निवेदन हाम्रो हुुनेथ्यो । तर के गर्नु जति मुर्मुरीएर गाली गरेपनि तिमी सर्वस्व हो । कानुन, न्याय, न्यायधिस भन्दा माथिका हौ तिमी । हाम्रो केही चल्दैन त्यो पनि थाहा छ ।
स्कुले जीवन जँहाबाट फर्कदा तिम्रो बाबाले खाजा आआफ्नो बटुकामा राखिदिनुहुन्थ्यो तिमी र बहिनी सानै भएर होला बाबाको माया अति धेरै थियो । बाबाको सरल, सहयोगी भावनाले होला सबै ईष्टमित्र, छरछिमेक, साथिभाईसंग राम्रो सम्बन्ध थियो ।
सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुने उहाँ अरूको दुख आफ्नो कर्तव्य सम्झने । उहाँ मिलनसार र सबैको नजिक हुनुहुन्थ्यो । अरूको दुख आफ्नै दुख सम्झने । दुखिलाई सहयोग गर्नुनै धर्म कमाउनु हो भन्ने । बाँचुन्जेल सहयोग गर्ने हो । गरिबको कहिलै चित्त दुखाउनु हुन्न भन्ने विचार राख्नु हुन्थ्यो तिम्रा बाबा ।
बुबालाई निको बनाएर घर लाने योजना यतिकै चकानाचुर भयो ।
छोरी दुःख परेको छ । नआत्तिनु । सबै कुरा बिस्तारै ठिक गर्दै लैजानुको कुनै विकल्प छैन् । गायिका ताराले गाएको गीत जस्तै ‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन । सम्झेँ जस्तो हुन्न जीवन । जस्तो भोग्यो, उस्तै हुन्छ । देखेँ जस्तो हुन्न जीवन ।’
:- राजकुमार गोले, हाल अमेरिका
सांसद हुमागाईंको अभिब्यक्तिले काभ्रे एमालेमा खैलाबैला !
एमाले काभ्रेको बृहत कार्यकर्ता भेला सुरू, हल भरीभराउ